November 17, 2020 - SANTHITSA
နှာချေခြင်း ကို လက်ဖြင့်ပိတ်ခြင်းဟာ သေစေနိုင်ကြောင်း ဆရာဝန်များက သတိပေး
နှာချေခြင်း ကို လက်ဖြင့်ပိတ်ခြင်းဟာ သေစေနိုင်ကြောင်း ဆရာဝန်များက သတိပေး နှာ ချေ တဲ့ အ ခါ မှာ ပါး စပ် နဲ့ နှာ ခေါင်း ကို ပိတ် တာ ဟာ ယဉ် ကျေး တဲ့ အ မှု အ ရာ တစ် ခု ပါ။ ဒါ ပေ မဲ့ ပြင်း ထန် တဲ့ လေ တွန်း အား ကြောင့် လူ တစ် ယောက် သေ လောက် တဲ့ ဒဏ် ရာ ရ …
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ်… ဒါပေမယ့် အခု အချိန်ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး
အိမ်ထောင် (၃) ခါ ကျဖူးတယ်… ဒါပေမယ့် အခု အချိန်ထိ အပျိုစင် ပဲရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေး အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုးိသမီး တစ်ယောက် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင် ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ ထူးဆန်း နေတာပေ့ါ နော် ….. ဒါနဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူး တယ်… …. အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါ ကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲ ဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတာ သိပါရစေ လို့ မေးလိုက်တော့ ….. ဒီလိုပါ… ပထမ ယူတဲ့ အမျိုးသား က သွေးတိုး …
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဒီအပြုအမူတွေ ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်…
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဒီအပြုအမူတွေ ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်… လူတစ်ယောက်စိတ်ကို ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်မှာလဲလို့ သင်တွေးမိ နေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို မျက်လုံးတွေ၊ အမူအရာတွေနဲ့ ဖော်ပြလေ့ ရှိကြတယ်။ သတိမထားမိလို့သာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ်နေတာပါ …။ အပြုအမူ၊ အမူရာတွေအကြောင်း အသေးစိတ် လေ့လာထားတဲ့ သြစတေးလျ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Alan Pease က လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကို သူ့ရဲ့အမူရာတွေ ကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတရအောင် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော် …။ ၁. မျက်လုံး မှိတ်ထားရင် လူတစ်ယောက်က မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စကားပြောနေမယ်ဆိုရင် သူက တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားချင်လို့ ဆိုတာ …
ထုံနာ ကျဉ်နာ သတိပြုစရာ
ထုံနာ ကျဉ်နာ သတိပြုစရာ ကြည်လွင်မြင့် ( မုဒြာ ) ၁ – နွေ မိုး ဆောင်း ဥတုသုံးလီတွင် ထုံနာကျဉ်နာခေါ် အကြောလေမလျှောက်သော ဝေဒနာသည် မိုးဥတုနဲ့ ဆောင်းဥတုတွင် ပို၍ အဖြစ်များသည်။ ဥတုပျက်မိုး အချိန်အခါမဟုတ်မိုး – လွန်ပဲစွာနှင်းကျခြင်း ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကြောင့် ထုံကျဉ်ရောဂါ တိုးနိုင်သည်။ ကျေးလက်ဒေသများတွင် သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးအဖွားများသည် အေးသောရာသီတွင် မီးလူံလေ့ရှိ ကြသည်။ မီးလူံနေမှ ခြေသလုံး. ညို့သကျည်း ကိုက်ခဲသောရောဂါ. ဒူလာရောဂါနဲ့ ထုံနာကျဉ်နာများ သက်သာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ အပူရှိန် ဟပ်သဖြင့် ခေတ္တသက်သာသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆောင်းဥတု၌ ရိပ်သာတရားစခန်းများတွင် ယောဂီနည်းလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် …